Sabotsy 11 Septambra 2021 – FJKM
Nanao izay nihaonana tamin’ny mpianany 11 lahy i Jesoa rehefa nitsangana tamin’ny maty .Tsy toy ny fihaonana hatramin’izay anefa izany fa ho fanomanana azy ireo hanao iraka kosa. Hoy i Jesoa : « Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany . Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra »
i Jesoa manam-pahefana dia mandidy ny hanatanterahan’ny mpianatra iraka mazava . Tsy miangavy Izy amin’izany , tsy mampisafidy koa fa mandidy mihitsy , izany hoe : tsy maintsy ataon’ny mpianatra ilay iraka . Raha atao ho isan’ny mpianatr’i Jesoa àry ny kristiana rehetra ,ny fiangonana dia tsy maintsy manao izany koa izy ireo .
2-Ataovy mpianatra ny firenena rehetra
Mazava tsara ny zavatra hanirahan’i Jesoa azy ireo dia ny hiasa mba hahatonga ny firenena rehetra ho mpianatra , izany hoe : ho mpanara-dia Azy , ho mpino Azy ,ho mpivavaka Aminy ,hanaiky sy hankato Azy ary koa hiaina ao anatin’ny fanekeny .Amin’ny teny hafa , ireto iraka dia tsy hanavaka na iza na iza fa hiasa hahatonga ny firenena rehetra na ny olona rehetra ho ao amin’i Jesoa avokoa . Ny fomba nolazain’i Jesoa hanatanterahana izany moa dia ny :
– Fanaovana batisa amin’ny Anarany
-Fampianarana ny olona izay rehetra tokony hotandremany amin’izany maha-mpanara-dia azy izany . Marihana fa tsy ilay fampianarana ataon’ny fiangonana mialohan’ny fanaovam-batisa ihany akory no lazaina amin’izany fa ny fampitana izany ho fiainana ho an’ny kristiana mihitsy .
Iza avy no irak’i Jesoa ? Iza no asainy atao batisa ? Ilaina ve ny fampianarana amin’ny fiainana maha-kristiana?